Isaayaas Afawarqii: ''Carraas ta'e qormaata nu eeggatu waliin keessa baana'' - BBC News Afaan Oromoo
Isaayaas Afawarqii: ''Carraas ta'e qormaata nu eeggatu waliin keessa baana''
Goodayyaa suuraa Ministirri Mummee Dr Abiyyi Ahimad affeerraa irbaataa irratti haasawa wayita taasisan
Walitti dhufeenya biyyoota lamaan jidduutti adda cite ture itti fufiinsuusaa mirkanneessuuf imbaasii deebiisanii saaquu, tajaajila buufata doonii fi balaliinsa xiyyaara itti fufiinsuun tarkaanfii jalqabaa ta'u ministirri mummee Dr Abiyyi Ahimad ibsaniiru.
Ministirri Mummee Dr Abiyyi haasawa affeerraa irbaataa masaraa biyyaalessaa Eertiraatti qophaa'ee irratti taasisaniin, tajaajilawwan balaliinsa xiyyaaraa, imbaasii fi doonii deebiisanii eegaluuf Pirezidaantii biyyattii Isaayaas Afawarqii waliin walii galuusaanii himaniiru.
Kana malees haasawa afaan Tigreefi Amaaraatiin taasisaniin, ''rakkoolee xixiqqoo biraa adeemsa keessa hiikna'' jedhaniiru.
Yeroon biyyoonni lamaan waliin guddinaaf hojatan amma ta'usaa kan dubbatan Ministirri mummee Adiyyi, daangaan ummattoota biyyoota lamaanii jidduutti adda bahuuf sababii akka hintaane himaniiru. Daangaan biyyoota lamaa jiddu tures riqicha jaalalaatiin bakka bu'eera jedhan.
''Oduu waraanaa haa gahu. Nutti boqonnaa nageenyaa fi tasgabbii haarawaa eegaluun boqonnaa waraanni hinjiru- nageenyi hinjiruu' xumuruu keenyaaf ummattoota Itoophiyaafi Eertiraa baga gammadaan jedhuun barbaada,'' jedhaniiru.
Jilli Itoophiyaa Mimistirri Muummee Itoophiyaa Dr Abiyyi Ahimad ogganamuun dowwannaa hojii Eertiraatti taasisaa jirus waldhabdeen biyyota lamaan jiddu ture xumuramusaa hime.
Akkasumas jaalalli Eertiraafi Itoophiyaaf jidduutti Asimaraatti roobee biyyoota Afriikaa bahaatiif kan hafuudha jedhaniiru Dr Abiyyi Ahimad haasawa afriikaa hundaaf ni hafa.
''Ummattoonni Itoophiyaafi Eertiraa gara boqonnaa waliin misoomsomsuun gara boqonnaa fayyadmtoota ta'uutti cee'aniiru. Yoo nageenya uuman nnaannichi naannoo misoomaafi nageenyaa ta'a, jedhaniiru Dr Abiyyi.
Lammiileen baqannaarratti argamanis gara biyyaatti ni deebii'us jedhaniiru. Ummanni Itoophiyaa jaalala malee jibba kamiyyuu isaaniif hinqabu kan jedhan Dr Abiyyi, nageenyi waan hundumaaf murteessaa ta'usaa himaniiru.
Pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayaas Afawarqii gama isaanitiin ''wanti ummanni Asmaraa bahuun gar'a agarsiise ibsa biraa hin barbaadu. Baga nagaan dhuftani qofaa osoo hin taane fedhii guddaa garaadhaa qabu kan ifatti agarsiise'' jedhaniiru.
Ummatota lamaan baga gammaddan jechuun barbaada, kan jedhan pirezidaant Isaayaas, ''miirri dhugaa biyya kanaa maal akka fakkaatu agartaniittu. Filannoon Dr. Abiyyi filate waan salphaa miti. Waggoota 25'f yeroon balleessine, carraan balleessine, gama kamiinuu madaaluun waan danda'amu miti,''jedhan.
''Amma garuu hin kasaarre. Ammaan booda imala qabnu Dr. Abiyyi waliin jirra. Carraas ta'e qormaata nu eeggatu waliin keessa baana,'' jedhaniiru
Dhibee busaa namatti deebi'uf falli argame